Noroahin’ny Polisy ny « squat de la Tour » [#Genève] – i am a malagasy in genève
11 juillet 2007 8 octobre 2010
© David MD, ch.indymedia.org, Polisy eo anoloan’ny « squat de la Tour »
Raha nandalo teny Plainpalais aho omaly tolak’andro dia nahatsikaritra fa nobahanan’ny fiaran’ny Polisy ny lalàna boulevard du Pont d’Arve izay miakatra mankany amin’ny Hopitalibe « HUG » [Hôpital Universitaire de Genève]. Zavatra tsy fahita eto Genève io satria na dia maro aza ireo filoham-pirenena sy manam-pahefana izay tonga mamonjy fivoriana na mandalo sy mitsidika ireo fikambanana maro anivon’ny Firenena Mikambana [organisations au sein de l’ONU] dia isan’ny zavatra tandrovina sy hajaina hatrany ny fifamoivoizan’ny vahoaka.
Taoriana kely dia henoko fa noroahin’ny Polisy nahazo baiko tamin’i Daniel Zappelli, « procureur général » eto Genève ireo tanora « squatter » tao amin’ny « squat la Tour » omaly 10 Jolay 2007, nanomboka tamin’ny 09:30 ora maraina. Nitohy hatramin’ny alina ny fisavorovoroana vokatr’izany ary narahina ra-kiafina nataon’ireo zatovo sy ireo mpitandro ny filaminana. Tsy nisy olona maratra, olona fito no natory tany amin’ny Polisy, fiara iray kosa no naongan’ireo zatovo ary fanariam-pako [poubelle] maro no nisy nandoro teny ampovoan-dalàna.
Fomba fanehoan’ny tanora eto Genève ny fahaleovantenany ny fandaovana ny fonenan’ny ray aman-dreny. Tanàna kely anefa i Genève ka nanomboka niha-sarotra ny manofa efitrano amin’ny vidiny mirary na hoan’ireo izay mbola mianatra, na hoan’ireo manomboka mikarama madinika.
Nohon’ny tsy fahampian’ny trano, toy ny tanan-dehibe eran’ny Erôpa dia nanomboka teto Genève ny fidiran’ireo zatovo an-keriny amin’ireo trano tsy misy mpanofa izay lazaina hoe « squat ». Matetika trano tranainy no voan’izany. Ny tetik’ireo tompon-trano moa dia misy tombony kokoa ny manorina nohon’ny manavao, ka miandry izay haharava tsikelikely ireo trano tranainy ry zareo mba hahamora kokoa ny fandravana ny tonta sy ny fanorenana trano vaovao izay hahofa lafo vidy [spéculation immobilière intense des années 80]. Ireto tanora vao miavotra anefa tsy mahaleo ny vidim-piainana eto an-tanàna ka voatery misitaka ivelany.
Tohanan’ny « gauche » ny hetahetan’ireo tanora ny hisian’ny trano ofaina amin’ny vidiny mirary eto Genève. Ireo antoko « droite » anefa no ivondronan’ireo tompon-trano izay mihevitra fa tompon-tsafidy amin’izay anaovany ny fananany ry zareo ka dia nikatso ela ny raharaha. Isan’ireo vaha-olana nataon’ny tompon’andraikitry ny tanànan’i Genève ny mividy ireo trano tranainy mba hanavaozana sy hampanofana azy amin’ny vidiny mirary, tsy ampy anefa ny isan’ireo trano ireo ka mandrak’ankehitriny ka isan’ireo tanàna lafo vidim-piainana indrindra eran-tany i Genève.
Taty aoriana azo lazaina fa lasa toerana ivoaran’ny kolo-tsaina anelakelan-trano eto Genève [culture underground] ireo « squat » ireo izay ivondronan’ny mpanankanto maro, izay mikarakara matson-kaingo [défilé de mode], na « studio » fandraisam-peo, na toerana fampisehoana sy fampiratiana samihafa [salles de spectacles et d’expositions].
Tamin’ny taona 1991 no nanomboka ny « squat de la Tour ». Efa noroahina indray mandeha ireo zatovo saingy tafaverina indray tamin’ny taona 2001 satria nijanona foana hatrany ilay trano. Marihina fa tanàna milamina i Genève ka raha misavorovoro ny vahoaka dia tsy hotanteraka ny fandroahan’ ny Polisy. Izany no antony nahatongavan-dry zareo an-tsokosoko sy nanapahany ireo lalàna maro manodidina.
Aorian’ity raharaha ity dia ny « squat du Rhino » izay tsy mifanalavitra aminy, sady « squat » antitra indrindra teto Genève [nanomboka 1988] izany sisa no mbola mitoetra. Ary efa mampandre ny vahoaka amin’ny mety hiavian’ireo Polisy atsy ho atsy ireo mponina ao. Marihina fa raharaha samy Soisa ity satria zanaka tompon-tany avokoa ny mponina amin’ireny « squat » ireny. Na dia samy sahirana aza, ireo vahiny mpihavy kosa dia tsy sahy ny tsy ara-dalàna fa miaritra manofa ireo trano lafo-vidy satria matahotra ny hotondroi-molotra sy ny asan’ireo Polisy.
[Le procureur général vide le squat de la Tour
et met Genève en émoi – letemps.ch >>]
[Le putsch version Zappelli – lecourrier.ch >>]
[Evacuation du squat de la Tour à Genève – tdg.ch >>]
[Squat de la Tour: heurts entre policiers et manifestants – ATS via swissinfo.org >>]
© oim, ch.indymedia.org, Fanariam-pako nirehitra omaly hariva tohin’ny fandroahana ny « squat de la Tour »
Posté dans sary, tsetsatsetsaTagué foto, genève, geneva, malagasy, photographie, photographies, photography, photos, rhino, squatpar tomavana3 commentaires
3 réflexions sur “Noroahin’ny Polisy ny « squat de la Tour » [#Genève]”
Ping: Miantso fanohanana ireo mponin’ny « squat du Rhino » [Genève, CH] « malagasy
Ping: Nilavo-lefona andro orana ny tandroka menan’ny « squat du Rhino » [Genève, CH] « Blog Archive « i am a malagasy in genève
← Ariary 797,9 lavitrisa | Vonjy ranovaky tapa-taona voalohany 2007
Miantso fanohanana ireo mponin’ny « squat du Rhino » [Genève, CH] →